အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူများ - 1D;ONE
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူများ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် 1D;ONE.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် 1D;ONE.
1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတီထွင်ဆန်းသစ်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည်တီထွင်ဆန်းသစ်သောအတွေးအခေါ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးပြောင်းလဲနေသော LED Lighting Market ၏စျေးကွက်တောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံကြသည်။.
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောအကောင်းဆုံးပစ္စတင်စက်ရုံစျေးနှုန်း - တရုတ်မှ 1D ထုတ်လုပ်သူများ
1D; အကောင်းဆုံးသောအကောင်းဆုံးပစ္စတင်စက်ရုံစျေးနှုန်း - တရုတ်မှ 1D ထုတ်လုပ်သူများ,& နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း - အင်ဂျင် 1600 ကျော်ကိုပြင်ဆင်ပါ1D အမှတ်တံဆိပ်, ပစ္စတင်တိုင်းသည်0မ်တန်ရှိ CNC Machine Tools မှပြုလုပ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ကုန်သည်အသေးစိတ်အရွယ်အစားတိုင်း၏သေချာစေရန်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ထုတ်ကုန်ကို Ultrasonic Wave ဖြင့်သန့်စင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမျက်နှာပြင်ကုသမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ရရှိနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်ကုသမှုများ - ပစ္စတင်ပစ္စတင်ဖော့ဖ်ဖာဖော့ဖ်ဖာဖော့ဖ်ဖာဖော့ဖ်ဖာဖော့ဖ်သည်အအေးအင်ဂျင်စတင်စဉ်ပစ္စတင်နှင့်ဆလင်ဒါလက်ကိုင်ဖုန်းအကြားပွတ်တိုက်မှုသုံးခုကိုတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပစ္စတင်ခေါင်း၏ anodaring (Anodging ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ပစ္စတင်၏အခက်အခဲများကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ပစ္စတင်၏ခိုင်မာမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။